Duugista Prostate -ka - Talooyinka Ragga Quruxda Badan | Ragga Caqliga leh
Alicia tomero | 29/07/2021 23:50 | Ku habboon, Lamaanaha iyo Galmada, Caafimaadka
Masaajidka qanjirka 'prostate' wuxuu leeyahay faa iidooyin badan iyo waa mid xasaasi ah. Guud ahaan waxaa jira rag ka caga jiidaya inay farsamadan fuliyaan, gaar ahaan ragga isku jinsiga ah, maadaama ay tahay wuxuu ku soo rogaa mawduuc xaaraan ah, Laakiin dhab ahaantii ma taqaanaa sida duugista prostate -ku tahay?
Ka kooban kicin qanjirka 'prostate' taasna waxaan u adeegsan doonnaa gacanta ama nooc ka mid ah toy ama qalab. Tan waxaan ku helnaa dareemo iyo waayo -aragnimo badan, iyo qayb waxaad ku gaadhaysaa orgasmiska qaab kale taas oo aan u naqaanay hab dhaqameed.
1 Waa sidee duugista qanjirka 'prostate'?
2 Duugista qanjirka 'prostate' miyaa xanuun badan?
3 Duugista qanjirka 'prostate' ayaa faa'iido leh
Waa sidee duugista qanjirka 'prostate'?
Ka kooban duug aagga prostate -ka laga helay jirka qofka. Qanjirka 'prostate' waa qanjir si sahal ah loogu heli karo gudaha futada, waa cabbirka walnut iyo waxay ku taal 5-7 sentimitir. Farta ayaa la gelin karaa futada waxaanan ka heli karnaa wax ka yar kaadi -haysta iyo hareeraha kaadi -mareenka. Waan dareemi doonnaa sababta oo ah cabbirkeedu waa hal sentimitir oo keliya iyo sababta oo ah waa barar yar.
Waa meesha loogu yeero G-spot ee ragga, laakiin gudaha dacwaddan oo la yidhaahdo dhibic P. Si aad u awooddo inaad duugto, waxaan soo bandhigi doonaa farta oo waxaan sameyn doonaa dhaqdhaqaaq soo noqnoqda oo siman oo kor iyo hoos. Waxaa jira alaabta carruurtu ku ciyaarto ee loogu talagalay ujeeddadan, halkaas oo aad u adeegsan doontid gacmahaaga si aad u gelisid oo aad ugu hagto halka isla marka aaladdu ku gariiri doonto.
Massagers ayaa u xuubsiibtay ujeedadan iyo waxay kordhiyeen iibkooda wax ka badan 50% sanadihii la soo dhaafay, iibsadeyaasheedu waxay ahaayeen rag isku jinsi ah iyo kuwa ka weyn 45 sano. Saliidleydu waa ku-dar wanaagsan si ay u awoodaan in ay saliidaan aagga oo ay helaan marin iyo socod wanaagsan. Si aad u isticmaasho mashiinnada duugista, waa inaad doorataa gariir lagu hagaajiyay xoogga iyo halka lagu hayo xawaare joogto ah.
Duugista qanjirka 'prostate' miyaa xanuun badan?
Xanuun malaha haba yaraatee kaliya haddii si kedis ah loo sameeyo, haddii cabbir aan habboonayn ama shay kale oo aan faa'iido u lahayn ujeeddadaas la isticmaalo. Sida ugu fudud ee loo sameeyo waa farta halkaas oo aan xoog badan loo adeegsan doonin si uusan dhiig -bax u keenin.
Qalabka sidoo kale lama isticmaali doono. qiyaas ahaan xoogna u adeegsan meesha meelaha ku hareeraysan ama xididdada dareemayaasha qanjirka 'prostate' ay waxyeello gaarsiin karto Dhaqdhaqaaqaagu waa inuu ahaadaa mid siman oo jilicsan, Halkaas oo aad la kulantid waxaad dareemi doontaa farxad weyn oo dhinacyo badan leh.
Waa fursad wanaagsan oo loogu talagalay raggu way ku raaxaystaan ​​wicitaanka dhibic P, iyada oo ay ugu mahadcelinayso duugisteeda waxay heli karaan inay ogaadaan orgasmyada aadka u daran. Dareenkeedu wuxuu u dhigmaa G-spot dheddig, aag ay ka buuxaan xididdada dareemayaasha, iyo kicinta kicintu dareemo badan oo wacan.
Duugista qanjirka 'prostate' ayaa faa'iido leh
Waa in la ogaadaa in kicinta qanjirka 'prostate' aysan lahayn waxba kuma laha jihada galmada, maadaama ay noqotay dhaqan aad u badan. Qanjirka 'prostate' waa mid ka mid ah xubnaha ugu waaweyn ee mas'uul ka ah taranka. Iyadu waxay masuul ka tahay abuuraan dheecaan shahwo ah dhaqdhaqaaqa shahwada iyo taas biyo baxa ayaa dhici kara.
Maskaxda qanjirka 'prostate' ma aha oo kaliya ujeeddo wacan, laakiin sidoo kale faa'iido badan ayey u leedahay daaweynta qanjirka 'prostatitis' iyo 'benip hyperplasia'. Haddii aad qabtid prostatitis faafa oo daran, laguma talin lahaa, maadaama ay kicin karto faafitaanka cudurkaaga.
Haddii aad ka xanuunsato mareenka kaadida, duug waxay kaa caawin doontaa dejinta caabuqa iyo xanuunka. Intaas waxaa sii dheer, waxaad kicin doontaa dareeraha si uu ugu daato solvency ka fiican waxaadna kicin doontaa aag leh ixtimaal sare oo kansarka qanjirka 'prostate'. Ku mahadsanid duugitaanadan wuxuu xajiyaa qanjirka 'prostate' caafimaad iyo caafimaad iyo cudur kasta ama cillad kasta oo la xidhiidha iyo cudurka cabsida leh ee kansarka si weyn ayaa loo dhimay.
Rag badan ayaa aaminsan in waayo -aragnimadooda raaxada galmadu ay xadidan tahay oo aysan ahayn sida ay u muuqato. Tani waa hab kale oo lagu baadho aaggan oo xitaa waad kari kartaa samee sidii hal -abuur lammaane. Kicintaada ayaa kaa caawin karta inaad hesho kacsiga weyn iyo biyo baxa ayaa dib u dhaca. Haddiise aadan ogeyn, waxaad sidoo kale tababbaraysaa muruqyada foorara markii aad kacsato, marka waad xakameyn doontaa tilmaantan.
Dib -u -dhacyada qaarkood waxay sababi karaan duugista noocan ah noqo mid waxtar u leh xaqiiqooyinka qaarkood. Tusaale ahaan, waxay ku dhacdaa xaalado aad ku xanuunsato babaasiirta halka kicintooda waxay keeni kartaa dhiig -bax badan la siiyay xoqidda xididada. Sidoo kale laguma talinayo marka ay jiraan dhagxaan qanjirka lagu sheegay maadaama ay dhaawici karto.
Si loo soo gabagabeeyo, waa inaad si fiican ula jaanqaaddaa waaya -aragnimadan, haddii jirkaagu awoodi karo, waa inaad la kulanto, iyada oo aan loo eegin da'da ama xaaladda galmada. Sidaas waxaad la kulmi doontaa adduunyo cusub oo dareen ah halkaas oo qaadashada khatartu kugu dhiirri gelin doonto inaad mar kale isku daydo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Duugista qanjirka 'Prostate'